Shaqaale Somali ah oo ku guulaystey magdhow farabadan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Mid ka mida shirkadaha ugu weyn aduunka ee qala hilibka, doofaarka iyo digaaga ee loo yaqaan JBS ayaa Somali farabadan maxkamad la fuuleen sanadii 2010. Cabashada ay Somalioda iyo madowgu qabaan ayaa ahayd in xuquuqdooda diiniga lagu tuntey.
”Waxa loo diide jirey inay tukadaan, waxa cay loogu qori jirey jikooyinka la fariisto xilliga nasashada, waxa xataa loo gaaray in bisha Ramadaan laga xirto biyaha si ayna u weysaysan ama u sii weyso qaadan salaada kahor.
Shaqaalaha badankooda ayaa laga eryay shaqada ayadoo marmarsiiyo looga dhigtey inay baxeen bila fasax. ”Waxa la yiraa waa tukan kartaan markaa salaada u baxnana albaabka aya nalaga xirtaa si anan u so noqon ayaa maxkamada loo gudbiyay.
11 sano sano kadib ayaa maxkamadu u xukuntey midkiiba 54 kun oo doolarka Maraykanka oo u dhiganta magdhowga guud inuu yahay 5 milyan iyo 500 oo doolarka Maraykanka ah.
Shaqaalaha badankooda oo la eryay ayaa hadda la amrey in dib loo qaato bilaa shuruud. Shirkada ayaa soo saartey qoraala inay qaadatey kiiska, ayadoo weliba lagu amrey in loo sameeyo meel u gooniya oo bilaa buuqa oo ay ku tukadaan.
Ma Karoona 21 ayaa ka dilaacay Koofur Afrika?
Ururka caafimaadka Aduunka ayaa hargabka cusub ee Karoona ...
Ciidanka Butlaan oo markale ku celiyay inayna aqoonsanayn horjooge Siciid Deni
Ciidankii Butlaan ee aaga buuraha Galgala u joogey ...
Ma aragno wax aan uga cararno Addis ababa: safaarada Ruushka
Ayadoo wadamada reer galbeedka ee taageera Tigreega kuna ...
Cabi Axmed oo sheegay in Tigreegu hadda baxsad yihiin lagana eryay Kasagita
Raiisal wasaaraha Itoobiya oo hadda si toosa u ...
Isku soo baxii ugu weynaa ayaa maanta ka ...
Jabuuti oo diidey in dalkeeda laga diro ciidamo Maraykanku ku qasayo Itoobiya
November, 14, 2021
Kadib markii shalay afhayeen u hadlay milatariga Maraykanka ...
Maraykanku haka noqdo cunaqabataynta uu saaray Eritariya iyo hanjabaada: Itoobiya
Dawlada dhexe ee Itoobiya ayaa camvbaaraysay cunaqataynta Maraykanku ...
Sirdoonka Somaliya oo qabtey aragagixiso kaamaro ku qarsaday qarax
Sirdoonka Somaliya ee afka qalaad loogu soo gaabiyo ...
Mustafe Cagjar oo hadda qirsan in Tigree xoog meelna ku gaarayn
Madaxweynaha Somali galbeed Mustafe Cagjar ayaa hadda qirsan ...
Madaxweyne wacad ku maray inuu Afqaan iyo Somali ka soo buuxiyo xadka Yurub
Ayadoo laga cabsi qabo in xadka Bolan iyo ...
Kiiniya oo kordhinaysa goobaha ay Somalida kaga qaadayso cashuurta
Kiiniya ayaa sheegtay inay kordhinayso goobaha ay dhiganayso ...
Maxay yihiin dembiyada lagu helay Yugaandheyskii laga eryay dalka
Wasaarada arimaha dibedda oo war siisay saxaafada caalamka ...